HomeSuuqa kala iibsigaDenis Zakaria oo lasheegay inuu beeciisu ku kacayo wax ka yar £6m.
January 25, 2022 Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
Borussia Monchengladbach ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay inay la wareegto wakiilka xorta ah ee Denis Zakaria ugu yaraan 5.9 milyan ginni inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga bisha Janaayo.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Switzerland ayaa galay lixdii bilood ee ugu dambeysay qandaraaskiisa kooxda Bundesliga, mana kordhin doono sii joogida Borussia-Park.
Kooxaha sida Manchester United , Liverpool , Arsenal iyo Bayern Munich ayaa dhamaantood loo malaynayaa inay ku jiraan loolanka loogu jiro saxiixa Zakaria, kaasoo xor u ah inuu wada xaajood la galo kooxo ajnabi ah oo ku saabsan beeca xorta ah xagaaga.
Si kastaba ha ahaatee, khabiirka suuqa kala iibsiga Fabrizio Romano ayaa soo wariyay in kooxaha xiiseynaya ay u baahan yihiin kaliya inay huraan £5.9m si ay ugu abaalmariyaan Zakaria inuu ka tago Monchengladbach bishaan.
Romano ayaa intaa ku daray in 25-sano jirkaan aysan u badneyn inuu u dhaqaaqo koox Premier League ah, taasoo albaabka u furaysa Bayern, Borussia Dortmund iyo Juventus inay isku dayaan inay ka wadahadlaan heshiiska.
Zakaria ayaa dhaliyay labo gool iyo caawin 18 kulan oo uu ciyaaray xilli ciyaareedkan,waxana uu u saftay 146 kulan guud ahaan Monchengladbach tan iyo markii uu ka yimid Young Boys 2017.